ပြိုင်ပွဲဖျားနာ Play: android များအတွက် Moto | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ပြိုင်ပွဲဖျားနာ: Moto
ပြိုင်ပွဲဖျားနာ: Moto APK ကို
ပြိုင်ပွဲဖျားနာ၏ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကမော်တာပြိုင်ကားအတှေ့အကွုံလာ! ဒီဂိမ်းမှာတော့ကျနော်တို့တာယာတရံသင်တို့အဘို့အတူတကွပူဇော်နိုင်ပါတယ်အပေါငျးတို့သ adrenalin, ပျော်စရာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု blended ပါပြီ။ အဆိုပါအံ့သြဖွယ်ပြိုင်ကားအတွေ့အကြုံနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုချနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
တစ်ဦးထက်ပိုလက်တွေ့အတွေ့အကြုံ, သင်သည်သင်၏ပြိုင်ကားသမားရဲ့ရှုထောငျ့မှ play သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောကင်မရာကိုထောင့်ကိုသုံးပြီးပြိုင်ပွဲပေါ်တွင်သင်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအသေးဆုံးအသေးစိတ်ဆင်း 16 ကွဲပြားခြားနားသောဆိုင်ကယ်လုပ်ပါတယ်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ရွေး ယူ. , ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲပစ်နှင့်ပြိုင်ကားကိုစတင်ပါ။
အဆင့်ဆင့်၏4ကွဲပြားခြားနားသောဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်များနှင့်သောင်းချီနှင့်အတူတစ်ဦးကပြိုင်ကားစွန့်စားမှု
4 ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများနှင့်4ရက်စက်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်များ! တစ်ခုအံ့သြဖွယ်လေထုထဲတွင်ကွဲပြားခြားနားသောရာသီများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောပြိုင်ကားအမျိုးအစားများသောင်းချီကိုသင်စောင့်ဆိုင်း။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားသမားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့အားလုံးကို4ခေါင်းဆောင်များအနိုင်ယူ!
4 ကွဲပြားခြားနားသောထိန်းချုပ်မှု options များ
ငါတို့သည်နောက်နှစ်ခုပြိုင်ကားသမားရောနှောသိရ! ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှသည်ကျေနပ်ဖို့ထိန်းချုပ်မှု option ကိုပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင်းနေဖြင့်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ကိုထိခြင်းအားဖြင့်သင့်စက်ဘီးထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင့်အနေဖြင့်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရမကျန်ဆင်ခြေရှိသည်!
Mode ကို escape
နေ့စဉ်အပိုဆု Mode ကို
ငါတို့သည်သင်တို့အဖိုးတန်လက်ဆောင်တွေအနိုင်ရနေ့စဉ် Race နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ mode ကိုထည့်သွင်းဖို့မေ့လျော့တော်မမူခဲ့!
ပုဂ္ဂလိက Mode ကို
သငျသညျ, နေ့၏အချိန်ကိုသတ်မှတ်ရာသီဥတုအခြေအနေများ, အသွားအလာသိပ်သည်းဆ, အမြန်နှုန်းနှင့်စီးဆင်းမှုနှင့်ရဲများကပင်အရေအတွက်ရ! သင်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမသတ်မှတ်!
97.57 ကို MB
ကတ္တရာ 8: ...
GT ကိုပြိုင်ပွဲ 2: အဆိုပါ ...